“W’ahenni Mmra”​—Ɛnde, Bere Bɛn? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mizo Moore Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“W’ahenni Mmra”—Ɛnde, Bere Bɛn?
“Sɛ muhu eyinom nyinaa a, munhu sɛ wabɛn apon ano.”—MAT. 24:33.
Ɔkwan bɛn so na nsɛm a asisi wɔ wiase fi 1914 no ma yehu sɛ Bible nkɔmhyɛ rebam?
Sɛ yɛhwɛ sɛnea bɔne rekɔ anim a, dɛn na ɛka kyerɛ yɛn?
Sɛ wohwɛ sɛnea awiei no abɛn a, ɛka wo sɛn?
1, 2. (a) Ɔkwan bi so no, dɛn na ebetumi ama nnipa ‘ani afura’? (b) Dɛn na yenim fa Onyankopɔn Ahenni no ho?
FA NO sɛ asɛm bi asi w’anim ma bere kakra atwam. Sɛ yɛka sɛ ka nea esii a, ebia ɛnyɛ ne nyinaa na wubetumi aka no pɛpɛɛpɛ. Saa nso na sɛ obi kɔ dɔkota hɔ ma ɔhwɛ no na ɔne no bɔ yare no ho nkɔmmɔ a, ebia ɛnyɛ ne nyinaa na obetumi akae no ntɛm. Ɛtɔ da nso a, na obi safoa anaa n’ahwehwɛniwa da ne nkyɛn pɛɛ, nanso wobɛhwɛ na ɔretwa ne ho hwehwɛ. Adɛn nti na ɛba saa? Nhomanimfo bi frɛ eyi “anifurae.” Nea wɔkyerɛ ne sɛ, sɛ obi ma nneɛma gye n’adwene a, egyaw no awerɛfiri, na biribi da ne nkyɛn mpo a onhu. Saa ara na nnipa adwene yɛ adwuma.
2 Ɔkwan bi so no yebetumi aka sɛ nnipa pii ‘ani afura’ nnɛ; wɔn ani tua nea ɛrekɔ so wɔ wiase nanso wonhu nea ɛkyerɛ. Ebia wobegye atom sɛ efi 1914 reba no wiase asesa koraa, nanso asɛm no ne sɛ wonnim nea enti a aba saa. Nanso Yehowa nkoa deɛ Bible nti yenim sɛ Onyankopɔn Ahenni no baa 1914; saa bere no na wosii Yesu Hene wɔ soro. Nanso yɛrentumi nka sɛ ɛno ma yenya yɛn mpae yi ho mmuae korakora: “W’ahenni mmra. W’apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so te sɛ ɔsoro.” (Mat. 6:10) Sɛ woyi wiase bɔne yi fi hɔ a, ɛnna ɛbɛkyerɛ sɛ yɛanya yɛn mpae no ho mmuae korakora. Saa bere no na Onyankopɔn apɛde bɛyɛ hɔ wɔ asase so sɛnea ɛte wɔ ɔsoro.
3. Dɛn na Bible adesua aboa yɛn ma yɛahu?
3 Esiane sɛ yesua Onyankopɔn Asɛm daa nti, yehu sɛ nkɔmhyɛ pii renya mmamu. Nanso nnipa dodow no ara nhu no saa. Biribiara kyerɛ sɛ Kristo adi hene fi 1914, na ɛrenkyɛ ɔbɛsɛe wiase bɔne yi. Nanso nnipa ama wiase no agye wɔn adwene araa ma wonhu adanse pefee yi. Sɛ wobaa asafo no mu akyɛ a, w’ankasa bisa wo ho sɛ: ‘Sɛ mehwɛ nea ɛrekɔ so wɔ wiase a, metumi aka sɛ meda so ara gye di sɛ awiei no abɛn paa?’ Sɛ wobaa asafo no mu nkyɛe mpo a, wubetumi abisa wo ho sɛ, ‘Dɛn na mama agye m’adwene?’ Wiɛ, momma yɛnhwɛ nneɛma abiɛsa bi a ɛkyerɛ sɛ ɛrenkyɛ koraa Onyankopɔn Hene a wasra no no bɛkeka ne ho na wama Onyankopɔn apɛde ayɛ hɔ korakora wɔ asase so.
APƆNKƆSOTEFO NO AYI WƆN TI
4, 5. (a) Efi 1914 reba no, dɛn na Yesu reyɛ? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.) (b) Apɔnkɔsotefo baasa no gyina hɔ ma dɛn? Adɛn nti na yebetumi aka sɛ nkɔmhyɛ no abam?
4 Afe 1914 na Yesu Kristo nyaa n’abotiri wɔ soro, kyerɛ sɛ ɔbɛyɛɛ Onyankopɔn Ahenni no so Hene. Nkɔmhyɛ a ɛwɔ Adiyisɛm ti 6 no ka sɛ Yesu te ɔpɔnkɔ fitaa so. Bere a ɔbɛyɛɛ Ɔhene no, wantena ne to so koraa na ofii adi sɛ ɔrekodi Satan wiase bɔne no so nkonim na wawie ne nkonimdi no koraa. (Monkenkan Adiyisɛm 6:1, 2.) Nkɔmhyɛ no kyerɛe sɛ, sɛ Onyankopɔn Ahenni fi ase di tumi a, wiase no bɛte nkensen ma nneɛma asɛe koraa. Akodi, ɔkɔm, yare, ne nneɛma foforo behwim nnipa nkwa asen bere foforo biara. Wohwɛ nkɔmhyɛ no a, wɔde apɔnkɔsotefo baasa a wodi Yesu Kristo akyi pɛɛ no gyinaa hɔ maa akodi, ɔkɔm, ne yare.—Adi. 6:3-8.
5 Nkɔmhyɛ no kyerɛe sɛ ɔko ‘beyi asomdwoe afi asase so.’ Ɛwom, aman pii ahyehyɛ bɔ sɛ wɔbɛka abom apere asomdwoe, nanso asomdwoe atu ayera afi asase so. Wiase Ko I no sɛee ade, nanso nea akɔ so wɔ wiase ada no adi sɛ na ɛno yɛ akodi akɛse a ɛbɛkɔ so no mfiase ara kwa. Efi 1914 reba no, nnipa atu mpɔn wɔ asetenam na wɔakɔ wɔn anim nyansahu mu, nanso wiase no da so ara su kɔm. Bio, hena ne obetumi de ne nsa asi ne bo aka sɛ nyarewa ne atoyerɛnkyɛm a ekunkum nnipa mpempem afe biara nni hɔ? Ɔhaw yi ahyeta wiase nyinaa, na ɛba ntoatoaso na ɛredi nnipa awu sen bere biara wɔ nnipa abakɔsɛm mu. Sɛ wo ara wotena ase hwɛ eyinom nyinaa a, wunhu sɛ ɛreka biribi kyerɛ wo?
Apɔnkɔsotefo no ayi wɔn ti ma nneɛma sɛe ara na ɛresɛe wɔ wiase (Hwɛ nkyekyɛm 4, 5)
6. Henanom na wɔde wɔn ani dii Bible nkɔmhyɛ akyi, na bere a wohui sɛ Bible nkɔmhyɛ abam no, dɛn na wɔyɛe?
6 Bere a Wiase Ko I pae gui na Spania influensa yii ne ti no, egyee nnipa dodow no ara adwene. Nanso Kristofo a wɔasra wɔn no deɛ, nea na wɔrehwɛ kwan ne sɛ “amanaman mmere a wɔahyɛ” no bɛba awiei 1914. (Luka 21:24) Ná wonnim ɔkwan pɔtee a nkɔmhyɛ no bɛfa so abam, nanso na wonim sɛ ke ara ne ke biribi titiriw besi 1914 a ɛfa Onyankopɔn Ahenni ho. Bere a wohui sɛ Bible nkɔmhyɛ no abam pɛ na wofii ase bɔɔ dawuru kyerɛɛ nkurɔfo sɛ Onyankopɔn Ahenni afi ase redi tumi. Wɔn a na wɔrebɔ Ahenni no ho dawuru no hyiaa ɔsɔretia a ani sõsõ paa. Ɔsɔretia yi kɔɔ so wɔ aman pii so, na na ɛno mpo yɛ Bible nkɔmhyɛ bi mmamu. Nnipa a wɔmpɛ Onyankopɔn Ahenni no ‘nam mmara so de ɔhaw baa’ adawurubɔfo no so mfe pii. Wɔhwee anuanom de ebinom guu afiase; wɔsɛn ebinom bobɔɔ ebinom tuo, na wotwitwaa ebinom ti mpo.—Dw. 94:20; Adi. 12:15.
7. Adɛn nti na nnipa nhu sɛ nea ɛresisi wɔ wiase no kyerɛ biribi?
7 Sɛ yɛhwɛ adanse pii a ɛkyerɛ sɛ wɔde Onyankopɔn Ahenni asi hɔ wɔ soro a, asɛm a yebisa ne sɛ, ‘Adɛn nti na nnipa pii nhu eyi?’ Adɛn nti na wonhu sɛ nsɛm a ɛresisi wɔ wiase no yɛ Bible nkɔmhyɛ mmamu sɛnea Onyankopɔn nkurɔfo abɔ ho dawuru mfe pii no? Nea saa nnipa yi ani hu nkutoo na agye wɔn adwene anaa? (2 Kor. 5:7) Adɛn, wiase nneɛma na afura wɔn ani a enti wonhu nea Onyankopɔn reyɛ? (Mat. 24:37-39) Anaa wɔn mu bi ama Satan wiase no nnaadaa ne ne bɔhyɛ hunu no retwetwe wɔn? (2 Kor. 4:4) Egye gyidi ne nhumu na obi ahu nea Onyankopɔn Ahenni reyɛ. Ɛyɛ yɛn dɛ sɛ yɛmmaa wiase no mfuraa yɛn ani!
BƆNE REKƆ ANIM
8-10. (a) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ 2 Timoteo 3:1-5 anya mmamu? (b) Adɛn nti na yebetumi aka sɛ kɔ ara na bɔne rekɔ anim?
8 Yɛwɔ adanse a ɛto so abien a ɛkyerɛ sɛ ɛrenkyɛ koraa Onyankopɔn Ahenni bedi asase so tumi. Ɛne sɛ: Kɔ ara na nnipa rekɔ wɔn anim bɔneyɛ mu. Yɛbɛka a, bɔne ate praka. Nkɔmhyɛ a ɛwɔ 2 Timoteo 3:1-5 no anya mmamu bɛyɛ mfe ɔha ni. Yehu sɛ suban ne nneyɛe a saa kyerɛwsɛm no ka ho asɛm no agye wiase baabiara. Saa na wuhu no anaa? Momma yɛnhwɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ nneɛma regye nsam.—Monkenkan 2 Timoteo 3:1, 13.
9 Wo deɛ hwɛ nneɛma a ɛkɔ so nnɛ wɔ adwuma ne agodie mu, na hwɛ nkurɔfo ntadehyɛ ne nneɛma a wɔde gyigye wɔn ani. Sɛ wode toto tebea a na ɛwɔ hɔ bɛyɛ mfe 60 anaa 70 a atwam ho a, wubehu sɛ nea na ɛyɛ asefem saa bere no, ɛnnɛ nnipa yɛ a wɔn ani mmu wɔn dwɛ. Baabiara a wobɛfa biara ɔbrasɛe fitaa ne amumɔyɛsɛm abu so. Ɛnnɛ obiara pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ, sɛ ɛba akakabensɛm, atuntunasɛm anaa ɔbrasɛe a, ɔno na yɛnto dwom mfrɛ no. Television so dwumadi bi wɔ hɔ a bɛyɛ mfe 60 a atwam no na nkurɔfo kasa tia denneennen, nanso ɛnnɛ nkurɔfo huruw sɔ, na wɔka sɛ mmusua betumi atena ho ahwɛ. Ɛnnɛ, mmarima a wɔne mmarima da ne mmea a wɔne mmea da agye sini ne anigyede ahorow abɔ so. Wɔyɛ saa de bɔ dawuru sɛ nkurɔfo nhwɛ nsua wɔn. Yɛda Onyankopɔn ase paa sɛ wama yɛahu n’adwene wɔ eyinom ho.—Monkenkan Yuda 14, 15.
10 Wo deɛ san fa w’adwene kɔ bɛyɛ mfe 60 a atwam so. Nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ aberante anaa ababaa yɛ a, na wobu no sɛ n’ani atra ne ntɔn. Sɛ yɛbɛyɛ ho nhwɛso a, saa bere no sɛ obi wɔ ba a, ade a na ɛyɛ no dadwen paa ne sɛ abofra no bɛnom sigaret anaa nsã anaasɛ ɔbɛte sɛ ɔresaw asabɔne. Nanso ɛnnɛ, sɛ wohwɛ nneɛma a mmabun yɛ a, ani yɛ nyan paa. Ɛnnɛ wobɛte yese sukuuni bi a wadi mfe 15 atwe ne mfɛfo so tuo akum 2 apirapira 13. Ɔkyena wobɛte yese mmabun bi a wɔawe nsã abow akum mfe akron abeawa yayaayaw asan ahwe ne papa ne ne nua agu so. Wobuu akontaa wɔ Asia man bi mu hui sɛ amumɔyɛsɛm ne awurukasɛm a ɛkɔɔ so mfe du ntam no fã kɛse no ara fi mmofra. Hena paa na obetumi aka sɛ ɛnnɛ nneɛma nnyee nsam?
11. Adɛn nti na nnipa pii nhu sɛ sɛe ara na nneɛma resɛe?
11 Ɔsomafo Petro kae a ɔmmoa sɛ: “Nna a edi akyiri no mu no, fɛwdifo bedi wɔn ankasa akɔnnɔ akyi abedi fɛw aka sɛ: ‘Ne mmae a wɔahyɛ ho bɔ no wɔ he? Hwɛ, efi da a yɛn agyanom dedae no, biribiara te sɛ nea ɛte fi abɔde mfiase.’” (2 Pet. 3:3, 4) Adɛn nti na nnipa binom yɛ wɔn ade saa? Nea ɛte ne sɛ, sɛ nkurɔfo taa hu biribi a, ebedu bere bi no sɛ wohu a ɛnyɛ wɔn nwonwa bio. Sɛ wowɔ yɔnko bi na ne suban sesa prɛko pɛ a, ebetumi ama wo ho adwiriw wo paa. Nanso sɛ wote kurow bi mu na nnipa dodow no ara abrabɔ sɛe nkakrankakra a, ɛno deɛ ebia w’adwene renkɔ so mpo na wo ho adwiriw. Ɛwom, nnipa abrabɔ sɛe nkakrankakra a yɛn adwene renkɔ so ntɛm, nanso yɛrentumi nka sɛ asɛm nni ho; ɛyɛ hu paa.
12, 13. (a) Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛma nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase no bu yɛn abam? (b) Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛagyina “mmere a emu yɛ den” no ano?
12 Ɔsomafo Paulo bɔɔ yɛn kɔkɔ sɛ nna a edi akyiri mu no, “mmere a emu yɛ den bɛba.” (2 Tim. 3:1) Nanso eyi nkyerɛ sɛ yɛrentumi nyɛ ho hwee koraa, enti enni sɛ yegyae yɛn ho ma nneɛma bunkam yɛn so. Yehowa ne ne honhom ne Kristofo asafo no bɛboa yɛn ma yɛatumi agyina huammɔdi ne akomatusɛm biara ano na yɛakɔ so asom no. Bible ka sɛ “tumi a ɛboro onipa de so” no yɛ Onyankopɔn dea, ɛnyɛ yɛn dea.—2 Kor. 4:7-10.
13 Bere a Paulo rehyɛ nna a edi akyiri no ho nkɔm no, ofii ase sɛ, “hu eyi.” Saa asɛm no si so dua sɛ ke ara ne ke nkɔmhyɛ no bɛbam. Yenim sɛ wiase bɔne yi bɛkɔ so ara asɛe na aporɔw atete kosi sɛ Yehowa beyi afi hɔ koraa. Abakɔsɛm ama yɛahu sɛ ɔman bi abrabɔ porɔw a, na ɔman no ahwease ara na adu no. Ɛnnɛ, yɛhwɛ wiase mũ no nyinaa a, yehu sɛ ɔbrasɛe a ɛkɔɔ twi kɔɔ brɛman nyinaa nnipa yɛ bi. Nokwasɛm ne sɛ ne sɛso mmae da wɔ abakɔsɛm mu. Ebia nnipa pii mfa eyi nyɛ asɛm, nanso sɛ yɛhwɛ sɛnea nneɛma asɛe fi 1914 reba a, ɛsɛ sɛ ɛma yenya ahotoso paa sɛ ɛrenkyɛ koraa Onyankopɔn Ahenni de wiase bɔne yi bɛba awiei.
AWO NTOATOASO YI RENTWAM
14-16. Dɛn ne ade a ɛto abiɛsa a ɛma yehu sɛ Onyankopɔn Ahenni ‘bɛba’ nnansa yi ara?
14 Nneɛma bi akɔ so wɔ Onyankopɔn nkurɔfo mu, na eyi ma yehu ade a ɛto so abiɛsa nti a ɛsɛ sɛ yenya ahotoso sɛ awiei no abɛn. Ɛho nhwɛso ni: Ansa na wɔde Onyankopɔn Ahenni no resi hɔ wɔ soro no, na anokwafo bi a wɔasra wɔn de nsi resom Onyankopɔn. Ná wɔrehwɛ kwan sɛ nneɛma bi bɛkɔ so 1914, nanso bere a amma saa no dɛn na wɔyɛe? Wɔn mu dodow no ara kɔɔ so dii Yehowa nokware, na wogyinaa sɔhwɛ ne ɔtaa ano pintinn. Saa Kristofo a wɔasra wɔn yi adi nokware akosi owu mu.
15 Bere a Yesu rehyɛ nkɔm afa nneɛma nhyehyɛe yi awiei ho no, ɔkae sɛ: “Awo ntoatoaso yi rentwam da kosi sɛ eyinom nyinaa bɛba mu.” (Monkenkan Mateo 24:33-35.) Yenim sɛ bere a Yesu kaa “awo ntoatoaso yi” ho asɛm no, na ɔrekyerɛ Kristofo akuw abien a wɔasra wɔn. Afe 1914 no, na kuw a edi kan no mufo wɔ hɔ, na wohui sɛ Kristo afi ase redi Hene saa afe no. Saa kuw no mufo yɛ Onyankopɔn mma a wɔde honhom sraa wɔn ansa na 1914 reba anaasɛ wɔsraa wɔn saa afe no mu.—Rom. 8:14-17.
16 Kuw a ɛto so abien no nso ka “awo ntoatoaso yi” ho. Saafo no yɛ Kristofo a wɔasra wɔn a wɔbɛtoo kuw a edi kan no mufo. Bere a kuw a edi kan no mufo bi da so ara wɔ asase so no na wɔde honhom kronkron sraa kuw a ɛto so abien no mufo. Eyi kyerɛ sɛ ɛnyɛ obiara a wɔasra no na ɔka “awo ntoatoaso” a Yesu kaa ho asɛm no ho. Ɛnnɛ, kuw a ɛto so abien no mufo mfe akɔ anim paa. Nanso Yesu asɛm a ɛwɔ Mateo 24:34 no ma yɛn awerɛhyem sɛ “saa awo ntoatoaso yi rentwam” kosi sɛ ahohiahia kɛse no befi ase. Eyi kyerɛ sɛ wɔn mu bi de wɔn ani behu ahohiahia kɛse no mfiase. Ɛsɛ sɛ saa asɛm yi nso ma yenya ahotoso sɛ ɛrenkyɛ koraa Onyankopɔn Ahenni no so Hene bɛkeka ne ho na wasɛe abɔnefo nyinaa na ɔde wiase foforo adom treneefo.—2 Pet. 3:13.
KRISTO BEWIE NE NKONIMDI NNANSA YI ARA
17. Sɛ yɛhwɛ nneɛma abiɛsa a yɛasusuw ho yi a, dɛn na yebetumi aka wɔ ho?
17 Sɛ yɛhwɛ nneɛma abiɛsa a yɛasusuw ho yi a, dɛn na yebetumi aka wɔ ho? Yesu kae sɛ yennim da ne dɔn pɔtee no, na ɛnyɛ ade a yebehu nso. (Mat. 24:36; 25:13) Nanso Paulo kae sɛ “bere no” deɛ yenim. (Monkenkan Romafo 13:11.) “Bere no” ne nna a edi akyiri no, na saa bere no mu ara na yɛte. Sɛ yegye bere susuw Bible nkɔmhyɛ ho na yehu nea Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo reyɛ nnɛ a, ɛnyɛ obi na ɔbɛka akyerɛ yɛn sɛ wiase bɔne yi awiei adu ara ne sa.
18. Wɔn a wɔmpɛ sɛ wobegye Onyankopɔn Ahenni atom no, dɛn na ɛbɛto wɔn?
18 Ɛnnɛ, Yesu Kristo te ɔpɔnkɔ fitaa so redi nkonim. Wɔn a wɔapirim wɔn koma a wɔmpɛ sɛ wogye ne tumidi tom no begye wɔn ani so nnansa yi ara; wobehu sɛ wɔadi mfomso kɛse. Wɔrentumi nguan atemmu a ɛreba wɔn so no da. Saa bere no so a, wɔbɛbɔ abubuo sɛ: “Hena na obetumi agyina?” (Adi. 6:15-17) Adiyisɛm ti 7 yi saa asɛmmisa no ano. Ɛma yehu sɛ saa bere no, wɔn a wɔasra wɔn ne wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no ‘begyina’ efisɛ Onyankopɔn gye wɔn tom. Afei, nguan foforo no mu “nnipakuw kɛse” no betwa ahohiahia kɛse no akɔ Onyankopɔn wiase foforo no mu.—Adi. 7:9, 13-15.
19. Seesei a wunim sɛ ɛrenkyɛ awiei no bɛba no, dɛn na worehwɛ kwan?
19 Sɛ yɛhwɛ sɛnea Bible nkɔmhyɛ rebam wɔ yɛn bere yi so na yegye bere dwinnwen ho a, ɛbɛhyɛ yɛn den na Satan wiase no amfa ne nnaadaasɛm antwetwe yɛn. Afei nso ɛbɛboa yɛn ma yɛahu nea nsɛm a ɛresisi wɔ wiase no kyerɛ ankasa. Aka kakraa bi Kristo bewie ne nkonimdi korakora na wasɛe wiase bɔne no wɔ Harmagedon ko no mu. (Adi. 19:11, 19-21) Hwɛ sɛnea yɛn ani begye saa bere no!—Adi. 20:1-3, 6; 21:3, 4.
Share Share “W’ahenni Mmra”—Ɛnde, Bere Bɛn?
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 2014